Mila mizara kapila CD sy DVD amin'ny Mac maro ve ianao? | Avy amin'ny mac aho
Mila mizara kapila CD sy DVD amin'ny Mac maro ve ianao?
Pedro Rodas | | Apple, OS X Mavericks, Tutorials
Tsy vao izao no nanazavana taminay ny fomba "hizarana" ao amin'ny OSX, na ny efijery, ny mpanonta, ny fitantanana lavitra na, raha ny raharaha misy antsika anio, ny CD-DVD drive ivelany na tsia.
Mazava fa ny fanapahan'ny mpamaky CD-DVD sy ny endrika hafa amin'izao fotoana izao toa ny Blu-Ray dia tsy ampiasaina ary amin'ny raharahan'i Apple, ny MacBook Pro sisa no mijanona, satria ny sisa amin'ny solosain'ilay orinasa dia efa tsy manana kapila CD-DVD. Mba hananana singa iray amin'ity karazana ity ao amin'ny solosaina ireo dia tsy maintsy manana iray ivelany isika.
Amin'ity tranga ity dia manana singa iray amidin'i Apple aho, ny SuperDrive. Izy io dia singa vita amin'ny aliminioma tanteraka miaraka amina famaranana toy ny sisa amin'ny solosain'ilay orinasa. Ny zava-misy dia tamin'ity herinandro ity aho dia nila nila nizara ilay singa taminà Mac maro tamin'ny lalam-piofanana tokony homeko ny mpampianatra ao amin'ny sekoliko.
Nidina tamin'ny asa aman-draharaha aho ary nizara ny drive tamin'ny Macs, mba hahafahan'ny tsirairay amin'izy ireo miditra amin'ny fampahalalana amin'ilay kapila. Mazava fa ny vahaolana iray hafa dia ny famoronana sarin'ny kapila avy eo zarao amin'ny pendrive ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, fa amin'ity tranga ity, hampianarana ireo izay manatrika dia nataoko tamin'ny fizarana ilay singa.
Mba hanaovana izany dia araho ireto dingana manaraka ireto:
Ampifandraiso amin'ny solo-sainanao ilay singa, satria raha tsy mampifandray azy ianao dia tsy hiseho ao amin'ny lisitry ny safidin'ny fizarana fizarana.
Raha vao mifandray dia mankany amin'ny System Preferences izahay ary miditra ny fizarana fizarana. Ho hitanao fa efa miseho ao amin'ilay lisitra ilay singa.
Izao dia mila misafidy fotsiny ianao mba hizarana azy eo anelanelan'ny solosaina rehetra izay mifandray amin'ny WiFi iray ihany. Azonao atao ihany koa ny misafidy raha tianao ny manontany anao ny rafitra isaky ny maniry hiditra ao amin'io singa io ny mpampiasa iray.
Araka ny hitanao, ny filôzôfia dia mitovy amin'ilay atorinay anao tamin'ny lahatsoratra teo aloha teo amin'ny fizarana Internet amin'ny Mac, fa amin'ity tranga ity hizarana kapila CD sy DVD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X Mavericks » Mila mizara kapila CD sy DVD amin'ny Mac maro ve ianao?
Inona no hatao rehefa mihantona amin'ny "Miomana amin'ny backup" ny Time Machine
Ampiasao ny "Preview" hiarovana ny PDFs anao amin'ny teny miafina [Soso-kevitra]